Naqshad: Sida loo Isticmaalo Qalab Dhaafka Webka
Waxaa jira barayaal badan oo DIY internetka. Haddii aad u baahan tahay kaliya inaad soo qaadato qadar yar oo xog ah, waxbarashadu waxay ku caawin kartaa. Laakiin haddii aad u baahatid in aad soo qaadato xog aad u badan oo joogto ah, ka dibna waa in aad shaqaaleysiiso shirkad khibrad saddexaad leh oo websaydh ah. Gaariddu waa mid ka mid ah bixiyeyaasha adeegyadan oo kale, dad badanna waxay u adeegsan jireen hawlgalkooda shabakadda. Mashruucu waa mid aad waxtar u leh. Sidaas awgeed, waxaa lagula talinayaa dadka u baahan inay si joogto ah u xoqaan xog badan.
Marka laga reebo waxtarkeeda, sidoo kale way fududahay in la isticmaalo. Tallaabooyinka fudud ee loo baahan yahay si loo isticmaalo moobiilka ayaa lagu soo koobay halkan.
Tag bogga dalbashada shabakada shabakada ee CrawlBoard adoo gujinaya xiriirkan. Buuxi foomka diiwaangelinta si habboon. Waxaa jira beeraha magaca ugu dambeeya, magaca dambe, cinwaanka emailka, iyo doorka shaqada. Markaad sameyso, kaliya riix barta badhanka. Warqad otomaatik ah ayaa loo diri doonaa cinwaanka emailka ee aad bixisay si loo xaqiijiyo. Furi emailka oo guji xidhiidhka xaqiijinta si aad u dhaqaajiso xisaabtaada CrawlBoard cusub.
Ujeedada ugu muhiimsan ee tallaabadani waa in lagu daro goob lagu riixo, laakiin waxaad u baahan tahay marka hore inaad abuurto koox koox. Koox kooxeed waa kooxo goobo leh qaab dhismeed isku mid ah. Tani waxaa loogu talagalay dadka sida caadiga ah u baahan xogta jarista oo ka socda goobo badan oo isla markiiba ah.
Si aad u abuurto koox xur ah, riix "Create a linkgroup cusub". Waxay ku taala dhinaca midig ee sanduuqa xulashada ee Sitegroup. Kadib, waxaad hadda ku dari kartaa dhammaan boggaga ka tirsan kooxda xagiisa hoose ka dib marka la isku riixo Xiriirka Dheeraadka ah ee ku yaala dhinaca midigta sare ee bogga. Kadibna, dooro goobaha mid ka mid ah.
U tag daaqad furan ee kumbuyuutar si aad u bixiso magac gaar ah oo aad u xulato kooxdaada. Xasuuso in dhammaan boggaga ku yaala xaafad kooxeed ay leeyihiin qaab isku mid ah, haddii kale ma heli kartid wax sax ah.
Si aad u fahamto muhiimadda koox-kooxeed, tusaale ahaan goobaha shaqo-barashada. Haddii hawsha la codsaday ay tahay in la xoqo shaqooyinka laga soo bilaabo guddiyada shaqada, markaa waxaad u baahan doontaa inaad abuurto koox xallin si ay u waafajiso shaqada iyo dhammaan boggaga ku jira guddi-kooxeedku waxay noqon doonaan goobaha shaqada.
Sida ku cad beeraha loo baahan yahay shaashaddan, waxaad u baahan tahay inaad dooratid inta jeer ee xogta laga soo saaro, qaabka gudbinta, iyo qaabka bixinta. Isbeddelada ee xogta waa maalinle, asbuuc, bil kasta, iyo caadooyinka.
Habka gudbinta, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah XML, JSON, iyo CSV. Iyo habka gudbinta, waxaad u baahan tahay inaad dooratid FTP, Dropbox, Amazon S3, iyo REST API.
Shaashadda waxaa loogu talagalay macluumaad dheeraad ah. Waxaa loogu talagalay dadka isticmaala si ay u sharxaan hawsha kaydka shabakada ee dheeraad ah. Inkasta oo ay tahay ikhtiyaari, waxaa muhiim ah in lagu daro macluumaad dheeraad ah sababta oo ah wax badan oo aad ku sharxi lahayd shaqadaada, bixiyaha adeegga ayaa si sax ah u fahmi doona waxa aad rabto, iyo waxay keeni doontaa natiijo wanaagsan.
Waxaad kaloo weydiisan kartaa qaar ka mid ah adeegyada qiimaha-ku-darka ah ee shaashadan. Qaar ka mid ah waxaa lagu martiqaaday inay isdifaacaan, Faylka isudiyaarinta, Goobaha sawirada, iyo Gaadiidka degdegga ah.
Halkan, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad gujiso "Boos u dirista jaaniska suurtagalnimada". Ujeedadu waa in adeeg bixiyaha si uu u hubiyo haddii shaqadaadu tahay mid macquul ah. Waxaad heli doontaa email kuu sheegi doona haddii shaqadaadu tahay mid suurtagal ah ama aan ahayn. Haddii ay sidaas tahay, hadda waad tagi kartaa oo bixin kartaa lacag. Marka lacagtaada la xaqiijiyo, kooxda CrawlBoard ayaa ficil galin doonta.
Ka dib markaad bixiso, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad sugto macluumaadkaaga naqshadda qaabka aad adiga ku qeexday, adoo adeegsanaya habka aad u dooratid Source .